विहान उठन अल्छी लाग्छ हो ? यी उपाय अपनाउनुहोस ! « Onlinetvnepal.com
विहान उठन अल्छी लाग्छ हो ? यी उपाय अपनाउनुहोस !
Published : 16 May, 2019 1:26 pm
विहान चाडैं उठनको लागि अलार्म सेटले तपाईलाई सहयोग गर्नेछ । अगाडिका योजना बनाउनु होस र विहान चाडैं उठने योजना वास्तविक दिन भन्दा करिब एक हप्ता पहिले बनाउनुहोस । खासगरी यो छोराछोरीलाई विद्यालय पुर्याउन र कार्यालय समयमा पुग्नको लागि सहयोग गर्नेछ । हरेक दिन उठनको लागि समय भन्दा १०–१५ मिनेट पहिला उठने प्रयास गर्नुपर्छ, यही प्रयासले तपाईलाई सजिलो बनाउँछ र समयको साथमा समायोजित गराउँछ ।
यदि घडिका अलामले तपाईलाई विहान चाडैं उठन दिक्क गरेको छ भने अरु सदस्यलाई विहान चाडैं उठाईदिनु भन्न सक्नुहुनेछ। नियमित रुपमा सुत्नको लागि एक दैनिकी तयार गर्नुहोस यहाँ सम्म कि हप्तामा एक चोटी हुने छुट्टीको दिनमा पनि यो बानीले तपाईलाई विहान चाडैं उठनको लागि मद्दत गर्दछ। पर्याप्त निदाउनु पर्छ किनकी तपाई आफूलाई ताजा तन्दुरुस्त महसुस गर्न सक्नुहुनेछ । दैनिक करिब ७–८ घण्टा निदाउनु स्वास्थ्यको लागि लाभदायिक मानिएको छ। यस्तो गर्नाले विहान चाडैं उठन अल्छि लाग्दैन ।